Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kabaha Castilian | Ragga Stylish
Kabaha Castilian Waxay ahaayeen ku dhowaad qarni tan iyo markii la abuuray mana ka baxaan qaab. Waxay si ballaaran u isticmaalaan ragga waqtiyo badan marka la eego tayadooda wanaagsan. Waxaa lagu soo saaray markii ugu horreysay 1920 aqoon isweydaarsiga Madrid. Mccasins-ka Castilian-ku waa gebi ahaanba farshaxanno, hanashada hal abuuraha kasta wuxuu reebaa calaamadda qaabka iyo hufnaanta sheyga.
Ma rabtaa inaad ogaato noocyada kabaha Castilian ee jira iyo kuwa ugu fiican? Qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba 🙂
1 Ku soo saar dun laba jibbaaran
2 Habka been-abuurka
3 Moodooyinka kabaha Castilian
3.1 Tuutaha maaskaro leh
3.2 Castellanos oo leh tassels
3.3 Kali caag ah Castellanos
3.4 Dadka reer Castille ee leh ganaax ama wareeg wareega ah
4 Daryeelka iyo dayactirka
Ku soo saar dun laba jibbaaran
Maqaarka lagu sameeyo samaynta moccasins-kani waa Florentic. Waa nooc maqaar ah oo dhalaalkiisu badan yahay aadna u dabeecad leh oo isbeddel keena. Sida waxyaabo kale oo badan, waxaa jira dad neceb dhalaalka noocan ah, laakiin kuwa kale, way jecel yihiin. Maqaarka waa la saxay dhumucdiisuna aad ayey u sarreysaa midka caadiyan loo isticmaalo kabaha kale. Tani waxay ka dhigeysaa kabaha Castilian inay leeyihiin cimri dherer weyn.
Faa'iidada ay bixiyaan kabaha noocan ah kuwa kale waa raaxo. Maaddaama ay farsamo gacmeed yihiin, soo saare kastaa wuxuu ku hagaajiyaa cagaha macaamiisha. Sidan oo kale waxay ku siin kartaa raaxada ugu badan iyo raaxada raad raaxo badan.
U hibeynta iyo khibradda xirfadle kasta ayaa ah qodob go'aaminaya qiimeynta tayada kabaha. Tolitaanka dhismaha ayaa ah midka inta badan qeexaya tayada dadka reer Castilers. Farsamada loo adeegsaday tolidda waa tan dunta labalaabka ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan tolmada "entrecarne". Dadka reer Castille ayaa ah kuwa ugu tayada sareeya farsamadan awgeed.
Waxaa si toos ah loogu sameeyaa kan ugu dambeeya iyada oo leh laba cirbadood iyo dun duneed dabiici ah. Waa soosaar aad u jilicsan, maadaama tolmo kasta la tiriyey. Haddii midkood uu guuldareysto, howsha kor ku xusan oo dhan waa la qasmi karaa. Sanado badan oo waayo-aragnimo iyo dulqaad leh ayaa lagama maarmaan u ah sameynta kabo tayo leh oo Castilian ah. Guud ahaan, dhammeystirka ayaa ah mid aad u fiican, sidaas darteed qiimaheedu sidoo kale wuu sarreeyaa.
Si aadan ugu sii nagaanin dhagarta sida loo qurxiyay quruxdan, waxaan usheegaynaa inyar-yar. Waxa ugu horreeya ayaa ah in waxyaabaha ka mid ah soo saarista kabahaasi ay ka mid yihiin tolida aan soo sheegnay. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa loafers dhab ah, sidaas darteed waa mid ka mid ah shakhsiyaadka waa dhismahaaga kiowa. Ereygan wuxuu ka yimid kabo ay xirtaan Hindida Waqooyiga Ameerika.
Sifada ugu khaaska ah ee moccasin-style-ka moccasin ah ayaa ah in qaybtiisa hoose lagu sameeyo isla maqaar sida durdurka. Tani waxay keentaa saameyn sida haddii cagtu ay gebi ahaanba dabooshay galoofis.
Nidaamka dhismaha wuxuu kaba siinayaa dabacsanaan weyn marka loo eego kuwa kale ee warshadaha iyo farsamada yar ee wax soo saarka farsamada.
Moodooyinka kabaha Castilian
Marka xigta, waxaan soo bandhigi doonaa noocyo ka mid ah moccasins-ka Castilian si aad si fiican u arki karto moodooyinka.
Tuutaha maaskaro leh
Sidoo kale waxaa si fiican loogu yaqaan magaca Beefroll wadamada Anglo-Saxon. Waa qaabka ugu aasaasiga ah ee caadiga ah. Iyagu waa kuwii ugu horreeyay ee la soo saaray waana kuwa qof walba indhaha ku qiraya.
Castellanos oo leh tassels
Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Tassel loafers' waxayna noqdeen astaanta kabaha ragga. Waxay leedahay noocyo badan oo kala duwan taas oo ka dhigaysa mid sax ah qaabkooda. Farqiga uu u leeyahay noocyada kale waa dusha sare ee dusha sare.
Waxay leeyihiin moodooyin kale oo aad u faahfaahsan oo dhinacyo ku leh dhinacyada marka laga reebo tassels-ka. Tani waxay siinaysaa taabasho qurxoon oo shaqsi ahaaneed iyada oo aan laga gaabin tayada naqshadeynta.
Kali caag ah Castellanos
In kasta oo inta badan kabaha Castilian-ka ay leeyihiin maqaar maqaar ah, kuwa sita caag ayaa aad loogu baahan yahay. Caaggu wuxuu ka caawiyaa inuu buuxiyo shuruudaha markay timaaddo labbiska oo wuxuu siiyaa muuqaal aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn.
Dhinaca kale, adeegsiga xargaha cinjirka ee nooca moccasins-ka waxay kordhisaa raaxada lasiiyay talaabo kasta. Maskaxda ku hay in maaddadani ay si fiican ula jaanqaadayso nooc kasta oo dusha sare ah.
Dadka reer Castille ee leh ganaax ama wareeg wareega ah
Inta udhaxeysa labadan moodal badankood ragga go'aansada inay iibsadaan kabaha qaabkan. Marka raaxada laga doorbido qaabka, wareega wareega waa ikhtiyaarka ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno kabo na siinaya taabasho gaar ah, waa inaan haysannaa ugu qaabeynta ugu dambeysay. Qodobka ganaaxa wuxuu siinayaa halis dheeraad ah dharkayaga.
Midabada ugu badan ee rootidan waxay yihiin madow iyo burgundy. Si loo ilaaliyo kabahaas had iyo jeer leh midab iyo tayo wanaagsan, waxay u baahan yihiin dayactir iyo daryeel. Way fududahay in la daryeelo, laakiin waa in aan la iloobin. Maqaarka loo yaqaan 'Florentic maqaarka' ee laga sameeyay ayaa ah mid aad ugu adkaysata khilaafaadka walxaha. Sidaa darteed, badanaa maahan inaan helno kabo xoqan. Si kastaba ha noqotee, waa maqaar u baahan xoogaa daryeel ah.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ku nadiifino bannaanka moccasin maro yar oo qoyan. Sidan ayaan uga saari karnaa boodhka iyo wasakhda dusha sare. Marka xigta, kareem yar ama boorsada kabaha, waxaan ku kala qaadnay lakab khafiif ah dusha oo dhan. Waxaan u oggolaanay inay qalajiso waxaanan u cadayan doonnaa si aan uga saarno kareemka xad-dhaafka ah. In badan oo aan cadayanno, dhalaalka ugu dambeeya ayaa ka sii yaraan doona ama ka yaraan doona. Tan durba waxaa looga tagay dhadhanka macaamilka.
Ku habboon in had iyo jeer waxaan hubinaa daboolka cidhibta iyo cagaha. Haddii ay tahay inaan dayactirno, waxaa fiican inaan u tagno kabaha aan ku kalsoon nahay si aan u beddelno. Waa in aynaan u oggolaan in kabaha ay dhibaato ka soo gaarto xirnaan xad dhaaf ah maadaama ay ka dhigeyso dayactirkooda mid aan macquul aheyn. Qiimaheeda awgood, ujeedku waa in laga dhigo nolosha waxtarka leh ama inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Ugu dambeyntiina, waxaa lagula talinayaa in aan maalin kasta la isticmaalin oo aan ku beddelano kabo kale. Haddii aan isticmaalno kabaha Castilian maalin kasta, lebiskooda iyo jeexjeexoodu wuu sii kordhayaa saameynta muuqaalkooduna wuu yaraan doonaa. Waxay u egtahay in maalin kasta aan ku labisanno dharkeenna ugu fiican. Dadku lama yaabeen inay na arkaan maalin kale oo isku mid ah.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan aad si fiican u daryeeli kartid rootidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kabaha Castilian
Timaha cad ee ragga